Akụkọ - Arụ ọrụ mgbe isi okpu gas dara
Ọ bụrụ na ụgbọ ala ahụ mebie mgbe ọ na-akwọ ụgbọala, e nwere ọtụtụ ihe kpatara ọdịda ahụ, akụkụ ọ bụla nwere ike ịda. Kedu ihe ga-eme ọdịda isi gasị? Ọnọdụ zuru ezu ka onye nrụpụta anyị ga-enye gị. Ka m webata ya.
Ebe ọ bụ na gasket cylinder nwere ọrụ nke akara mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na akụkụ ahụ ada ada, mgbe ahụ ọ ga-enwerịrị ụfọdụ ọrụ na-adịghị mma. Ọ bụrụ na enweghị mmachi akara akara ya, mmanụ a na-egbochi na mmiri ga-ehi mmiri, nke ga-emetụta ọrụ nke akụkụ ndị ọzọ.
A na-enwekarị mkpọtụ na-adịghị mma; na-agbọpụta mmiri na tankị mmiri na inyeaka mmiri nke ụgbọ ala; adịghị ike ịnya ụgbọ ala; anwụrụ ọkụ na-acha ọcha na anwụrụ ọkụ nke ụgbọ ala, nke nwekwara ike kpatara kpatara nsogbu gasị. Ihe omume ndị a dị mma, mana ha ga-etinye nchekwa nke ụgbọ ala ahụ n'ihe egwu, n'ihi ya a ghaghị idozi ya ma dochie ya n'oge.